प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हेटौंडामै : मूख्यमन्त्री पौडेल
२६ मंसिर २०७५, बुधबार १६:२४
काठमाडौं, २६ मंसिर । प्रदेश नम्बर ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी पुसभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्धपी उनले प्रदेशको राजधानी अहिलेकैलाई कायम गरिने स्पष्ट पारे ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भने, ‘आउने पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण गर्छौं । तर, अहिले राजधानी तलमाथि गरियो भने एक वर्ष फेरी भौतिक संरचना तयार पार्नकै लागि समय खेर जान्छ । हामीले नसकेर नामाकरण नगरेको होइन । हामी यो जम्माजम्मी दश महिना भुईँ र सुकुलमा बसेर काम गरेका हौं । यो अवधिमा हामीले सारा संरचना तयार गर्यौं । हामी बल्ल ट्रयाकमा हिँडेका छौं ।’
मूख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरु भर्खरै एउटा ट्रयाकमा हिँड्न थालेको र अब विकास निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ है भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा फेरी राजधानीलाई तलमाथि गरिए एक वर्ष ब्याक हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘हाम्रो राजधानी अहिले जहाँ छ, जसरी काम भैरहेको छ। भौतिक संरचनासहित त्यहाँ सेटअप छ । अब त्यो ठाउँबाट राजधानी लानेबित्तिकै हामीले यो वर्ष गरिएका योजनाहरुलाई बाधा पुर्‍याउँछ । १३ वटै जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरु सबै बनिसकेका छन् ।’
काम गर्नको लागि आफूहरुले वातावरण तयार पारेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अहिले दश महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले के गर्यो भनेर प्रश्नहरु उठेका छन् । होलान् । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छैन । केही समस्याहरु थिए । हामीलाई कानूनको अभाव थियो । हामीलाई टेक्ने ठाउँ थिएन । कानूनहरु थिएनन् । कानून नबनाइकन अगाडि बढ्ने हामीसँग कुनै आधार थिएन । त्यसैले हामीले कानून बनाउनको लागि प्राथमिकता दिएका थियौं ।’
Tagsडोरमणि पौडेल प्रदेश राजधानी
राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नयाँ साेचकाे नेतृत्व चाहिन्छ : प्रचण्ड
गण्डकी प्रदेशमा थप ५६ जनामा कोरोना संक्रमण
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर वनलाई कोरोना
चितवनमा एकै दिन २१२ जनामा कोरोना
कोरोनाबाट चितवनमा ३१ वर्षीय युवाको मृत्यु
निगमले पेट्रोलमा मिसावट गर्ने चालकलाई कारबाही गर्न पठायो पत्र
सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
शनिबारसम्म देशका यी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना
कतारमा २ नेपाली सम्मानित
नेपालमा प्याजको कालो बजारी, प्रति किलो कति ?
नारायणी नदीमा डुंगा पल्टिँदा एक युवा बेपत्ता
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षमा डा उप्रेती नियुक्त
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा
स्रेस्तेदार र सिडिओका भान्सेसहित ५० संक्रमित
बिल गेट्सका बुवा विलियमको निधन